के कारण ले अनमोल केशी म्युजिक भिडियो गर्दैनन?:: Mero Desh
के कारण ले अनमोल केशी म्युजिक भिडियो गर्दैनन?
Published on: १० भाद्र २०७८, बिहीबार १६:५३
पहिलो चरणको लकडाउनपछि नेपाली चलचित्रको बजार ठप्प छ । डेढ बर्षदेखि नेपाली चलचित्रको काम नहुँदा कलाकारका लागि म्युजि भि’डियो ठुलो राहत बनेको छ चलचित्रको काम नहँुदा कलाकारहरुले म्युजिक भि’डियो मा आफूलाई व्यस्त बनाएका छन् ।
भि’डि’योबाट डेढ बर्षमा करोडौं कमाउने केही नायक तथा नायिकाहरु पनि छन् ।यसमा केही कलाकार भने अप’वाद छन् । जसले महंगो पारिश्रमिकको अफर गर्दा पनि भिडियोमा काम गर्ने मन बनाएनन् । यसमा नायक अनमोल केसी पनि पर्छन् । अनमोल केसीलाई ७ लाख सम्म पारिश्रमिक दिएर भि’डियोमा अफर नभएको होइन ।
तर, अनमोलले आफूलाई रिजर्भ नै राखेका छन् । पहिलो चरणको लकडाउनपछि अनमोलले चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ४’को छायांकन भने सकाएका छन् ।नायक केसीले म्युजिक भिडियोमा काम नगर्नुको बिषयमा अनलाइन खबरसँग भने–‘सबै कलाकारको आ–आफ्नै सोच हुन्छ ।
म म्युजिक भिडियोलाई उच्च सम्मान गर्छु । भि’डियोले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिने काम गरिरहेको छ । तर, मलाई चलचित्रमा मात्र देखिऔं भन्ने लाग्छ । आफूलाई भिडियो मा काम गर्न मन नपरेको भन्दा पनि चलचित्रको गीतमा मात्र दर्शकमाझ आउने सोच हो ।’
अनमोलले भिडियोका लागि कलाकार तथा प्राविधिकहरु ले गरेको कामलाई उच्च सम्मान गर्ने बताए ।अनमोलले आफ्नो चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ४’ दर्शकमाझ चाडै आउने समेत ।जानकारी दिए का छन् । अनमोल चलचित्र ‘एक्स ९ र पारस’को काम सुरु गर्ने तयारीमा समेत छन् ।